dalab - TAIZHOU HEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
Ganacsiga aasaasiga ah ee Heya wuxuu diiradda saarayaa soo saarista wasakhda balaastigga ah oo leh in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah. Sida wasakhda reerka, wasakhda duritaanka qalabka jikada, qalabka caaryada qalabka guryaha, warshadaha iyo wasakhahaasi irbadaha beeraha, iwm.
Iyada oo leh karti iyo khibrad, si hufan u fulinaysa habeynta shakhsi ahaaneed iyo xallinta hal-joogsiga caaryada si loo daboolo baahiyaha macaamiisha waa ujeedada Heya Mold. taas oo ka hawl yar una ilaalinaysa macaamiisha.
Tan iyo markii la aasaasay, badeecadeenu waxay ku raaxeysatey sumcad sare suuqa caalamiga ah. Macaamiisha ku yaal Aasiya, Yurub, Afrika iyo Koonfurta Ameerika in ka badan 30 dal. Sida Russia, Argentina, Columbia, Romania, Brazil, Malaysia, Algeria iyo dalal kale.